Dhimasho, dhaawac, burbur ayaa la soo sheegay markii dhulgariir weyn ku dhuftay Haiti
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Haiti Breaking News » Dhimasho, dhaawac, burbur ayaa la soo sheegay markii dhulgariir weyn ku dhuftay Haiti
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Caribbean • Wararka Dowladda • Haiti Breaking News • Warshadaha Warshadaha • News • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka kala duwan
Xarumaha Digniinta Tsunami ee Mareykanka ayaa soo saaray hanjabaad Sunaamina, laakiin hanjabaadda ayaa la qaaday saacad gudaheed.
Dhulgariir xoog leh ayaa halakeeyay Haiti.
Warar aan la xaqiijin ayaa sheegaya dhimashada dhowr qof iyo dhaawacyo badan.
Digniinta Tsunami ayaa la soo saaray, laakiin waa la kansalay waxyar kadib.
Dhulgariir aad u weyn, kana awood badan dhulgariirkii ba’naa ee 2010, ayaa ku dhuftay Haiti subaxnimadii hore ee Sabtida, kaas oo khasaare ba’an ka geystay koonfurta dalka Caribbean -ka.
Sahanka Juqraafiga ee Maraykanka ayaa cabbirka dhulgariirka dhigay 7.2, ama “weyn.” Dhul-gariirku wuxuu ahaa 12km (7.5 mayl) waqooyi-bari Saint-Louis-du-Sud, oo ah magaalo ay ku nool yihiin in ka badan 50,000 oo qof.
Warar aan la xaqiijin ayaa sheegaya dhimashada dhowr qof iyo dhaawacyo badan. USGS waxay sheegtay in “ay suuragal tahay in qasaarooyin aad u badan laga yaabo in masiibaduna ay tahay mid baahsan” Haiti.
Burbur xooggan ayaa laga soo sheegay Haiti, iyadoo sawirro laga soo qaaday magaalada ku dhow ee Jeremie ay muujinayaan dhismayaal qayb ahaan burburay iyo waddooyin burbursan.
Fiidiyowga laga soo qaaday Jeremie ayaa muujiyay daruuro qaro weyn oo boor ah oo buuxiyay waddooyinka, iyadoo guryuhu ay burbursan yihiin.
Qaar ka mid ah dadka wax ku qora baraha bulshada ayaa soo sheegay inay dareemayaan dhulgariirka oo aad uga fog Jamaica, iyo Xarumaha Digniinta Sunaami ee Maraykanka soo saaray hanjabaad Sunaami waxyar kadib. Si kastaba ha ahaatee, hanjabaadda ayaa saacad gudaheed lagu qaaday.
Dhulgariirka ayaa dhacay daqiiqado kadib markii dhulgariir cabirkiisu yahay 6.9 uu ku dhuftay Jaziiradda Alaska. Si kastaba ha ahaatee, dhulgariirka Alaskan wuxuu ku dhuftay gobol aad u tiro yar, halkaas oo suurtagalnimada waxyeelladu aad uga hooseyso.